Chii chatinogona kutora kuenda kunzvimbo dzakachena | Green Renewables
Nuria | | Imba yeGreen, Kudzokorora
E-tsvina Nzvimbo Yakachena muUS
Isu tese takapihwa kanopfuura kamwe nedambudziko re maitiro ekurasa zvinhu zvekare iyo yatinayo muimba yekuchengetera kwemakore tisina kuziva zvine chokwadi chekuita navo, rimwe zuva rakanaka takaita pfungwa ndokudzikanda mumudziyo tichiri kunzwa "izwi rehana" rinotitaurira kuti tiri kuzviita zvisizvo, kuti tiri kusvibisa nharaunda.
Kana iwe uri mumwe kana mumwe wevaya vanoisa maoko pamusoro, ziva kuti pane mhinduro. Kutanga pane yakasarudzika yero, girini uye bhuruu midziyo ye bepa nemakadhibhokisi, girazi uye kurongedza. Kana pasina imwe munharaunda yako kana kuguta kwemaguta, unogona kuenda kuCity Council ukanomhan'ara, parizvino maKanzuru eGuta asingadzokorore anoripiswa.
Kana "hari" dzako dzisiri mukati meboka remarara emudhorobha andakambotaura, uchine imwe nzira ye "kwakachena mapoinzi»Yakagadziriswa kana nharembozha kwaunogona kusiya imwe mhando yemarara iyo zvinobudirira uye seyedu kuchengetedza kuchengetedza inotiudza kuti hatifanire kuisiya iri mumudziyo wakajairika kana mune iya yekudzokorodza.
Iyo tsvina iyo nehunhu hwezvinhu zvayo zvakanyanya chepfu uye dzinofanirwa kubviswa mune yakasarudzika michero kana ivo vanogona zvakare kutevera ketani ye dzokazve Uye uve kushandiswazve nevamwe vanhu kana masangano, senge makomputa uye nhare.
Tsvina yatinogona kutora kuenda kunzvimbo yakachena ndeiyi:
- Mabhatiri uye mabhatiriZvikamu zvaro, kunyanya mercury, zvinosvibisa zvakanyanya.
- Containers mishonga, ivo anoshandiswazve, zvirinani, paSIGRE yakachena poindi mumafamasi.
- Zviduku zvesimbi zvakadai semapani kana hari.
- TV y monitors, mapurasitiki, girazi nesimbi zvakapatsanurwa.
- Appliances, izvo zvinhu zvinopatsanurwa uye ese epurasitiki nesimbi zvinodzokororwa.
- Mafuta ekubika, zvinoshandiswazve kugadzira biodiesel.
- Mafuta emota, anoshandiswa sehwaro hwemafuta ekuzora.
- MaCD nemaDVD, mapurasitiki anoshandiswazve.
- Ropa, machira, matauro uye zvese textilesKana ivo vari muchimiro chakanaka, ivo vanopihwa kune hwesheni hwaro, kungofanana neshangu.
- X-ray, munyu wesirivheri nezvimwe zvinhu zvinowaniswa.
- Simba, marara, junk, huni, iwe unofanirwa kushandisa iyo Guta Horo rekuunganidza basa.
- Aerosol anopfapfaidza, zvikamu zvaro zvakapatsanurwa, kurongedza kunogadziriswazve.
- Pendi uye zvinonyungudutsa, izvo zvinhu zvakapatsanurwa uye midziyo inodzokororwa.
- Magetsi emagetsi Chemhondoro computers y mobile iwo akapatsanurwa uye makumi mapfumbamwe muzana anoshandiswa. Izvo zvinoshanda nemazvo (90%) zvinopihwa uye kushandiswazve uye izvo zvisingaitwizve nemafekitori enharembozha. Dzinopatsanuka kuita mapurasitiki nesimbi (ine lead uye zvimwe zvinhu zvinokanganisa muviri), zvakare ine simbi dzakakosha.
- Ink cartridges, ipurasitiki inowedzerwa patsva kana kushandiswazve.
- Fluorescent mababu, simbi negirazi zvinodzokororwa, guruva remekyuri rinowanikwa.
- Tambo, mapurasitiki nesimbi zvakaparadzaniswa uye zvishandiswezve.
Mumaguta ese eSpain mune mapoinzi egirini. Pa webhusaiti yeOCU pane girini dot tsvaga kwaunogona kuwana padyo nepamba pako. Zvakangwara kutaura kuti yega yakachena nzvimbo ine yayo tsika, saka zvakanaka kufona pamberi kuti uone vanowana chii uye chii vasingawani.
Zvinhu zvinotevera zvinodzoserwa kwatakatenga: matai nemagirazi. Insulini majekiseni anounzwa kunzvimbo yehutano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Imba yeGreen » Chii chatinogona kutora kuenda kunzvimbo dzakachena
Bvunza, unogamuchira machira here?
Nhema nezve lithiamu